चिकित्सकलाई छैन, प्रशासनका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता – Health Post Nepal
चिकित्सकलाई छैन, प्रशासनका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता
कृष्ण मल्ल /बुटवल
२०७७ भदौ १६ गते १८:३०
जोखिम भत्ता नपाएपछि कपिलवस्तुको सबैभन्दा बढी प्रभावित पालिकाका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलित
जोखिम भत्ता निर्देशिका परिमार्जन गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आश्वासन
जोखिम भत्ता नपाएको भन्दै वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले मन्त्रालयमा गरे नाराबाजी
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, बुटवलमा चिकित्सकलाई जोखिम भत्ता नदिएर प्रशासन फाँटका कर्मचारीले भत्ता बुझेको खुलासा भएको छ । प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले छानबीन गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।
अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले टोली खटाएर त्यसबारे अध्ययन गरेको थियो ।
अध्ययनमा जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने ३८ जना स्वास्थ्यकर्मी छुटेको पाइएको छ भने नियमले नपाउने २ जना प्रकाशन फाँटका कर्मचारीले जोखिम भत्ता बुझेको भेटिएको छ ।
यसैबीच बुटवल कोरोना विशेष अस्पतालमा खटिएका चिकित्सक र स्वस्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता र मासिक पारिश्रमिक नपाएपछि सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन ।
अस्पताल प्रशासनलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएपछि अस्पतालले जोखिम भत्ता नदिएको खुलासा भएको हो ।
अस्पताल प्रशासनमा पत्र बुझाउनेमा डा. साहिल भुषाल, डा. पुजन ज्ञवाली, डा. प्रतिमा भण्डारी, डा. बिशाल झा, डा. राजेश लिम्बु, डा. सनिमा न्यौपाने, डा. कल्याण रेग्मी, डा. आर्शिबाद अर्याल र डा. सबिता अर्यालले छन् ।
उनिहरुले संयुक्त रुपमा भदौ ११ गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई एक हप्ताको म्याद दिई ज्ञापनपत्र बुझाउदै पारिश्रमिक र भत्ता उपलब्ध गराउन आग्रह थिए ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल अस्पतालमा ९ जना चिकित्सक, ६ जना एचए, करीब ४ दर्जन नर्सिङ स्टाफ र ४ जना गार्डहरुले काम गर्दै आएका छन ।
मागलाई ब्यवस्थापन पक्षले बेवास्ता गरेको आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी एक चिकित्सकले दिए । उनिहरुले दिएको अल्टिमेटको म्याद बुधबार सकिदैछ । अब बुधबारसम्म निर्णय नभए आफुहरुले सेवा रोक्ने ति चिकित्सकको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सुर्य बहादुर भट्टराईले चिकित्सकहरुको माग पूरा गर्ने बताए । जटिल अवस्थामा खटिएका चिकित्सकहरुको तलब निकासा नभएको भनी आउनुभएको र यसको समाधान हुन्छ उनले भने ।
अस्पतालका दुई जना एकाउन्टेन्टहरु पोजिटिभ हुदा उनिहरु होम क्यारेन्टिनमा रहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको जानकारी पाएपछि प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पतालका कागजातको अध्ययन गरेको छ । अध्ययनमा अस्पतालका ३८ जना स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता नपाएको भेटिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिए ।
अस्पतालका २ जना कर्मचारीले नियमभन्दा बाहिर रहेर लिएको भत्ता भने फिर्ता गराएको उनको भनाई छ । स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाउनुको कारण के रहेछ भन्ने जिज्ञासामा सूचना अधिकारी डा. पौडेलले अस्पताल प्रशासनलाई उधृत गर्दै भने उहाँहरुले भुलबस भन्नुभयो, अब पाउनुहुन्छ ।
अस्पतालका करारका कर्मचारीले तलबको नपाएको बिषयमा मन्त्रालयले केही दिनभित्रै निकासा दिनेगरी प्रक्रिया अगाडी बढाएको बताए ।
Tags: जोखिम भत्ता
One thought on “चिकित्सकलाई छैन, प्रशासनका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता”
Aba jantale bujhisake.jun jun thauma yesta bekti xan aba jantalenai jhataro hanxan.Aba Hami swasthyakarmi thakisakyeu.
कानेगुजीको फाइदा-बेफाइदा दुवै, सफा गर्ने कुन विधि सबैभन्दा उपयुक्त?
सोमबार ५३ हजार ९४० सक्रिय संक्रमित, ४६ को निधन
ज्यानै लिने कालो ढुसी के हो? कसरी बच्ने?
बिहान उठ्दा पिसाब किन पहेँलो आउँछ? यस्तो छ कारण